बलात्कार « Lokpath
२०७६, १० माघ शुक्रवार १४:००
सुस्तमनस्थितिकी किशोरीलाई १० रुपैयाँ दिएर बलात्कार !
काठमाडौँ । सुस्तमनस्थितिकी किशोरीको बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ओखलढुंगाको सिंहदेवी गाविस घर भइ हाल भक्तपुरको सिपाडोल–६ बस्ने पूर्णबहादुर खड्का रहेको प्रहरीले जनाएको
साथी हिरासतमा रहेको मौका छोपी श्रीमतीलाई पेस्तोल देखाउँदै बलात्कार
काठमाडौं । पछिल्लो समय दिनहुँ जसो नै महिला हिंसाका घटनामा भइरहेका छन् । हिजोआज महिलाहरु आफ्नै नातेदार, साथीभाई बलात्कार भएको घटना दिनहुँ सुनिन थालेका छन् । भारतमा पनि एउटा यस्तै
सप्तरीमा ४ वर्षीया बालिका बलात्कृत, एक युवक पक्राउ
सप्तरी । इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले चार वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । खडक नगरपालिका–५ का २५ वर्षीय रामभगत चौधरीलाई सो आरोपमा बुधबार पक्राउ गरिएको
मोरङमा १२ वर्षीय बालिका बलात्कृत, ४५ वर्षीय कार्की पक्राउ
काठमाडौं । मोरङमा १२ वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छन् । बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा लेटाङ नगरपालिका–९ बस्ने ४५ वर्षीय भद्र बहादुर
मोरङ । मोरङमा युवतीलाई धम्की दिँदै बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–७ का २५ वर्षीय रविन आचार्य रहेका छन् । सामाजिक संजालमा फोटो
काठमाडौं । एक १९ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत स्याङ्जाले भिरकोट नगरपालिका-२ बस्ने ४५ वर्षीय फत्ते भन्ने रहमद अलिमियाँलाई बुधबार १० वर्ष कैद सजायका साथै पीडित किशोरीलाई ३०
हाडनाताबाटै बलात्कृत हुन्छिन् बालिका
काठमाडौं । पछिल्लो समय बालबालिकासम्बन्धी घटना बढ्दै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा विभिन्न जिल्लाबाट आएका जानकारी र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा परिषद्ले गरेको
काठमाडौं । महोत्तरी जिल्लाको सम्सी गाउँपालिकामा एक १६ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार सम्सी गाउँपालिका–२ पर्सादेवारका एक किशोरीमाथि सामूहिक
१५ वर्षीया किशोरीमाथि बसभित्रै बलात्कारको प्रयास !
काठमाडौं । मोरङमा बसमा यात्रा गरिरहेकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ । बसमा यात्रा गरिरहेको समयमा गत भदौ २२ गते किशोरीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले २ जनालाई
काठमाडौं । बागलुङमा ११ वर्षीया बालिकालाई आफ्नै काकाले बलात्कार गरी फरार भएका छन् । बालिकालाई बलात्कार गरी काठेखोला गाउँपालिका–५ का ६१ वर्षीय चन्द्रबहादुर सुनार फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले
दुर्गमका कर्मचारी भन्छन् – ‘बाटैमा मरिन्छ कि भन्दै सेवा गर्नुपर्छ’
banner, समाचार, समाज, स्वास्थ्य/ जीवनशैली
सुनको मूल्य तोलामा एक हजार सात सय रुपैयाँले घट्यो
नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्ने कि कांग्रेसलाई 'हिरो' बनाउने ?
उपचारपछि भट्टराई आज स्वदेश फर्किँदै